खेल घाँस, खेल मैदान, Sod घास चटाई - Wanhe
वान्हे घास एक उच्च-टेक इन्टर्नेट ब्रान्ड हो जसले R&D, उत्पादन र बिक्री एकीकृत गर्छ र कृत्रिम घाँसको क्षेत्रमा उत्कृष्ट ब्राण्ड सेवा प्रदायक र निर्माण बन्न प्रतिबद्ध छ। Huai'an Wanhe उद्योग र व्यापार कं, लिमिटेड सुन्दर दृश्य संग बेइजिzhou - हzhou्जो ग्रान्ड नहरको बैंक मा स्थित छ। यो ज्याian्सु प्रान्त, Huai'an शहर, एक पुस्ता को एक महान मानिस, Zhou Enlai को गृहनगर हो। Xinchang रेलवे र बेइजि--शंघाई एक्सप्रेसवे सुविधाजनक यातायात संग शहर को माध्यम बाट। मुख्य उत्पादनहरू खेल फार्म र घाँस परिदृश्य घाँस र हाम्रो आफ्नै कारखाना द्वारा अन्य उत्पादनहरू हुन्। हामीले विगत २० वर्षमा धेरै खुद्रा विक्रेताहरू र एजेन्टहरूसँग दीर्घकालीन र स्थिर सहकारी सम्बन्ध स्थापित गरेका छन। कुल निर्यातको 80०% भन्दा बढी निर्यात एक्सपोर्टको हो।
गोल्फका लागि वान्हे घाँस ल्याण्डस्केप सतह उपस्थिति र प्रदर्शनको आधारमा अतुलनीय यथार्थवादको प्रस्ताव राखेर वास्तविक राख्ने हरियो अनुभव अनुसार डिजाइन र निर्मित गरिएको छ। यसको उत्तम चिकनाई सटीक बल रोल ग्यारेन्टी गर्दछ र यसमा खेल्दा रमाईलो आराम प्रदान गर्दछ।
Wanhe घास को अनुभव को लागी धेरै खेलहरु को लागी कृत्रिम टर्फ बनाउने हामीलाई बहु उद्देश्य उद्देश्य को लागी उच्च प्रदर्शन उत्पादनहरु प्रदान गर्न को लागी प्रदान गर्दछ, जस्तै ११-एक साइड र-एक साइड फुटबल क्षेत्र, फुटबल र हकी क्षेत्र र फुटबल र रग्बी क्षेत्र ।
के तपाईंलाई थाहा छ अधिक र अधिक उपभोक्ताहरूले चेन स्टोर वा DIY स्टोरहरूबाट कृत्रिम घाँस किन्छन्? यो DIY का लागि व्यक्तिहरूको नयाँ तातो बिक्री उत्पाद हो। वान्हे ग्रास ल्यान्डस्केपले केही प्रख्यात चेन स्टोरहरूमा प्रवेश गरेको छ र विभिन्न विकल्पहरूको साथ चेन स्टोरहरूमा आपूर्ति गर्ने अनुभवले पूर्ण छ: रोल २ एक्स २m मीटर, रोल १x4 मीटर, म्याट १ एक्स १ मीटर, प्याड X० एक्स cm० सेमी।
युके - डेभिड
म Wanhe संग घाँस संग years बर्ष काम गर्दछु। यो वास्तविक घाँस हो! म यसलाई मेरो ल्यान्डस्केप प्रोजेक्टहरूको लागि प्रयोग गर्दछु र अन्त प्रयोगकर्ताबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दछु, र ठूलो व्यापार र सफलता पाउँछन्। धन्यवाद Wanhe घास टीम। म यो उत्पादन सिफारिश गर्दछ!
थाईलैंड - यिंगलक
यदि तपाईं यो तपाईंको लागि खरीदको सोचमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं निराश हुनुहुने छैन। यसको वास्तविक घाँस अनुभूति छ जुन पूर्ण घाँस र लामो प्रयोग गरीरहेको छ। यो महँगो मूल्यको लागि उत्तम उत्पाद हो र यो राम्रोसँग काम गर्दछ!
चिली - जोसे पिकासो
धेरै टिकाऊ र राम्रोसँग बनेको। यथार्थवादमा थप्नका लागि दुई धेरै धेरै हिटि surface सतहहरू छन्। शीर्ष गुणवत्ता! राम्रो निर्माता! कुनै पनि उत्पादनको साथ कुनै समस्या छैन। यो केवल म खोजिरहेको थिए। मेरो सबै क्लबहरूको लागि उत्तम आकार।
मेक्सिको - एन्टोनियो
सुपर सिफारिश निर्माता! द्रुत वितरण उत्पादन गुण राम्रो, घाँस नरम र वास्तविक छ। प्याकेज सामग्री पनि धेरै राम्रो छ। उनीहरूसँग शीर्ष गुणस्तर छ र उत्पादन क्षमता हाम्रो लागि स्थिर छ किनभने हामी जान्दछौं कि ती समस्याहरू समाधान गर्न हामीलाई समाधान गर्न सक्छन्। तिनीहरूको लोडिंग समूह र बिक्री धेरै पेशेवर छ। सिफारिश गरिएको।
जापान-- な か だ
परिदृश्य को लागी व्यावसायिक कृत्रिम हरियो कालीन घास। विक्रेता धेरै पेशागत र जिज्ञासाको जवाफ दिन द्रुत थियो। सम्पूर्ण कम्पनी धेरै ग्राहक सेवा उन्मुख देखिन्छ। म भविष्यमा फेरि यो विक्रेताको साथ व्यापार गर्न सिफारिश गर्दछु।
अमेरिका - गैरेट
धेरै राम्रो गुण उत्पादन, र धेरै मैत्री सेवा, धेरै पेशेवर कम्पनी। धन्यवाद Wanhe घास, हामी चाँडै सहयोग गर्नेछौं।
खगोल टर्फ सकर मैदान, ल्याण्डस्केपि Forका लागि ल्याण्डस्केपि G घाँसहरू, फुटबल टर्फ घास, कृत्रिम लॉन, नक्कल घाँस कालीन, कृत्रिम गल्फ घास,